Lufthansa, SWISS na Austrian Airlines ga-enye nri na ihe ọ beụ beụ na Economy Class na 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa, SWISS na Austrian Airlines ga-enye nri na ihe ọ beụ beụ na Economy Class na 2021
Airlines • Austria na -agbasa ozi ọma • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'ọdịnihu dị nso, Lufthansa, SWISS na Austrian Airlines ga-enye ndị ahịa ha ụdị ọrụ ọhụụ na Klasị Akụ na ụba. Bido na mmiri n’afọ 2021, ndị njem nọ n’ụzọ dị mkpirikpi na nke ọkara ga - enwe ike ịzụta nhọrọ sara mbara nke nri dị mma na ihe ọ onụ theirụ dị na ya iji gboo mkpa ha.
A na-etinye ụkpụrụ dị elu dị elu na ọkwa ọhụrụ site na nhọrọ maka nkwadebe na ngosi. Site n'echiche ọhụrụ, ụgbọ elu na-etinyekwa ego nke ukwuu na nkwado site na ịhọrọ ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi yana site na mbenata nri nri site na mmepụta nke ahaziri iche.
"Nri anyị na-enye ugbu a na klasị akụ na ụba anaghị emezu atụmanya nke ndị ọbịa anyị," ka Christina Foerster, onye otu ndị isi na Lufthansa Group na-ahụ maka ndị ahịa, IT & Corporate Responsibility na-akọwa. “E mepụtara onyinye ọhụrụ a dabere na nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa anyị. Site n'inye onyinye dị elu maka ịzụta, ndị njem anyị ga-enwe ike ikpebi ihe ha ga-eri ma drinkụọ na njem ha. ”
A ga-enweta nri na ihe ọveraụveraụ dị iche iche site na ụgbọ elu nke ọ bụla n'ụdị dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha ga-enwe ntụnye mpaghara. Ihe a ga-elekwasị anya na ngwaahịa ọhụrụ na nhọrọ nke nri nri. A ga-enyezi ọkọlọtọ, ekele nri agaghịzi adị n'ọdịnihu.
A ga-ewebata onyinye ọhụrụ a n'ụzọ dị ka oge opupu ihe ubi 2021: Austrian Airlines ga-amalite, SWISS na Lufthansa na-esote; ngwaahịa ọhụrụ ga-ekpughe site n'otu ụgbọ elu na ọnwa ndị na-abịanụ.